The Ab Presents Nepal » धुर्मुस सुन्तलीलाई विप्लप नेकपाको चेतावनी अब के हुन्छ ?
धुर्मुस सुन्तलीलाई विप्लप नेकपाको चेतावनी अब के हुन्छ ?
काठमाडौं: सामाजिक अभियानता तथा कलाकार धुर्मुस सुन्तलीलाई अर्को झड्का लागेको छ । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चितवनमा बन्न लागेको अन्तराष्ट्रिय गौतम बुद्ध रंगशाला नबनाउन धुमुर्स सुन्तलीलाई चेतावनी दिएपछि उनलाई अर्को झट्का लागेको हो ।चितवनको रामपुर स्थित कृर्षि बन विश्वविद्यालयको जग्गामा बनाउन लागेको रंगशालामा नबनाउन उक्त पार्टीले विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएको हो ।
विज्ञप्तिमा चेतावनी दिदा पनि अटेरी गरे त्यसपछिको परिणामको भागेदार स्वयम आफै हुन धुर्मुसलाई भनिएको छ । चितवन जिल्ला सेक्रेटरी धु्रवद्धारा जारी विज्ञप्तिमा चितवनमा अरु प्रसस्त खाली ठाँउ हुँदा हुँदै विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिन नगर्न भनिएको छ। विद्यार्थीको भविश्यसंग जोडिएको विश्वविद्यालयको सम्पतिमाथि कसैले पनि आँखा नलगाउन भनिएको छ।
बैठक कक्षमा भाँचिएको कुर्सीको आधी भाग उचालेर देखाउदै उनले भने ४ पटक भयो सभामुख महोदय म यहाँबाट लडेको। अहिलेसम्म दुर्घटना भएको छैन, बाँचिएको छ। तर, यो कतिपटक भन्नुपर्ने हो संसद सचिवालयलाई? आगामी दिनमा यस्ता कुर्सी कम्तीमा नराखियोस्। यो त धराप भयो। त्यसकारण यो त धेरै गम्भीर आपत्तिको विषय भएको हुनाले ज्यान जोगाई पाऊँ भन्नुपर्ने अवस्था आयो।